Naqshadeynta Qaaska ah - Xuzhou QLT Trade Co., Ltd.
Dahaarka budada UV & Duubista Sawirka
Samee qoraal inta aad ka ilaalineyso waxyaabaha ka soo baxa falaaraha UVA iyo UVB. QLT waxay bixisaa xal qurxin la awoodi karo oo kaa caawin kara astaantaada inay istaagto oo ay ka codsato macaamiisha kala duwan. Sameynta koobitaan kooban oo khamri ah? Waxaan leenahay qiimo hooseeya iyo qiime jaban oo aad u sareeya oo ku saabsan adeegyadayada qurxinta. La xiriir kooxdayada iibka si aad ugala hadasho shuruudahaaga gaarka ah. Gujihalkan si aan u aragno tusaalooyinka dhalada noo dhammaatay.
Dharka Shahaadada Joojinta, Dhamaadka Birta, Qaboojinta iyo Etching
Qaar badan oo ka mid ah dusha sare ee qurxinteena ayaa la isku dari karaa si loo gaarsiiyo dhalo leh saameyn muuqaal oo sarreeya. Ma waxaad raadineysaa midab ama naqshad gaar ah oo runtii ka hadlaysa astaantaada? La xiriir waaxdayada nashqadeynta oo waan kula shaqeyn doonnaa si aad u gaarto himiladaada. Guji halkan si aan u aragno tusaalooyinka dhalada noo dhammaatay.
Kordhinta Custom iyo Debossing
Baadhitaanka Xariirta & Shaabad kulul
QLT waxay ku takhasustay qaabeynta caaryada caadada ah. Waxaan soo qaadaneynaa astaantaada oo waxaan kuu abuureynaa naqshad caag ah oo qaab qaali ah laguu soo daabacay Tus macaamiishaada daacadda ah cidda dhabta ah ee aad tahay oo ku samee sumaddaada muraayad. Kala hadal waaxdayada injineernimada baahiyahaaga saxda ah.